Attack on the first - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: attack on the first russian position (Inglés - Birmano)
Thazin was the first
Go to the first image of the collection
On January 15, 2020 the first fatal case from Wuhan was reported.
2020 ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် ဝူဟန်မြို့၌ ပထမဆုံး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။
Chamroeun is the first Cambodian football blogger.
ချွမ်ရွန်သည် ကမ္ဘောဒီးယား၏ ပထမဆုံး ဘောလုံးအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးသူဖြစ်သည်။
'The first magical neighborhood of Mexico'
"မက္ကစီကို၏ပထမဦးဆုံး (မှော်ဆန်သော) အံ့ဖွယ်ရပ်ကွက် "
​အလွှာ မျက်နှာဖုံးပေါ် လုပ်ဆောင်ပါ
•get kicked on the shin
Bashar Zeedan links the new attack on the freedom of the Internet to the Jordanian Spring.
ဘာရှာ ဇီဒန်က အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအသစ်ကို ဂျော်ဒန်နွေဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြခဲ့သည်။
ဒံယေလသည် ကုရုမင်းကြီးနန်းစံပဌမနှစ်တိုင်အောင် ရှိနေသတည်း။
The first woman who receivedaprofessional education in Moscow.
မော်စကိုကနေ ပညာကောင်းစွာသင်ယူလာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီး ဓါတ်ပုံနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ အနေနဲ့ပေါ့။
ဧဇာတပါး၊ ဩဗဒိတပါး၊ ဧလျာဘတပါး၊
ပဌမနေ့၌ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရမည်။ အလုပ်ကို မလုပ်ရ။
On3March, UNESCO released the first global numbers on school closures and affected students.
မတ်လ3ရက်နေ့တွင် UNESCO မှနေ၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ပိတ်ထားသော ကျောင်းများနှင့် ထိခိုက်သော ကျောင်းသား အရေအတွက်အား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Annotate on the desktop screen.
kala khatta (Hindi>Inglés)terca (Catalán>Español)weapons (Inglés>Bosnio)enjoying (Inglés>Ucraniano)montreal (Francés>Inglés)pinakamaliit na daliri sa paa (Tagalo>Inglés)nalugi ang negosyo (Tagalo>Inglés)broedeieren (Letón>Inglés)pen ouy (Inglés>Italiano)i am interested in you (Español>Inglés)no obris la finestra (Catalán>Español)my whatsapp number (Inglés>Portugués)tsg (Alemán>Inglés)Избирателен район (Búlgaro>Español)referenciamennyiséget (Húngaro>Rumano)sophie (Inglés>Árabe)tagalog to bisaya (Cebuano>Tagalo)dental plaque (Inglés>Tagalo)i forgot everything (Inglés>Hindi)鬼才相信 (Chino (Simplificado)>Inglés)10 sentences about paropkar in hindi (Inglés>Hindi)sobre trabalenguas en quechua y espaÑol (Quechua>Español)bakit mo ginagawa ito sa akin (Tagalo>Inglés)كاجو (Árabe>Inglés)しょんべんもできねぇ (Japonés>Inglés)